အထည်ဆိုးဆေးစက် မှအကောင်းဆုံး အထည်ဆိုးဆေးစက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အထူးပြု အထည်ဆိုးဆေးစက်အတွက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကျမတို့က Taiwan။ ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ရမည်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တွေကျွမ်းကျင်စွာတစ်ဦးချင်းစီအပလီကေး၏မတူညီကြလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
အကောင်းဆုံး အထည်ဆိုးဆေးစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် အထည်ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေးအလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်နှင့်ရေအပြင်စွမ်းအင်သန့်စင်ကုန်ကျစရိတ်. CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါအထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့်ဆေးကြောစဉ်လည်ပတ်နေသည့်အ ၀ တ်အထည်များ၏ nozzle တည်ဆောက်မှုကကူညီသည်.ဤသည်ပိုကောင်းထည်ထိတွေ့ခံစားမှုရရှိ&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်.အပြည့်အဝလျှံ nozzle အထည်များ၏ pillingless သေချာ. ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစနစ်ကထွက်ခွာသောအခါထည်ဆိုးဆေးပြွန်ထဲမှာဖြန့်သည်&မည်သည့်ယန္တရားမျှချွတ်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲဆေးဆိုးခန်းထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ကျဆင်းသည်.ယင်းကြောင့်လည်ပတ်နေစဉ်ဆိုးဆေးထည်စနစ်တကျပေမယ့်မူမမှန်သိုလှောင်မှုဆေးဆိုးခန်းထဲမှာ.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အသားများကနေတားဆီး. UNIFORM ဆိုးဆေးအခန်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝန်စွမ်းရည်သည်အခန်းတစ်ခုစီတွင်ရှည်လျားသောထည်အရှည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်,ထည်သံသရာအချိန် minimize.လေးလံသောစုပ်စက်သည်ဆိုးဆေးများကိုအလွန်မြင့်မားသော pump pump ဖြင့်ပို့ပေးသည်.ဒီအင်္ဂါကအထည်နှင့်အတူဆိုးဆေးအရက်၏မြင့်မားသောဖလှယ်သေချာ,အရှင်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအောင်မြင်ခဲ့သည်. အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ်နှစ် ဦး စလုံးလက်စွဲစာအုပ်&အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,dilution&သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအားအစာကျွေးခြင်း,တဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ် degressively.ဤသည်အော်ပရေတာအမှားလျှော့ချရန်ကူညီသည်&ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်အောင်. စီးဆင်းမှုဆေးကြောစနစ်အထူးအထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းစနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်မှုနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်,အဝတ်လျှော်အချိန်ကိုလည်းလျှော့ချ. အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့် PILLINGLESSအပြည့်အဝလျှံ nozzle ဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဆေးကြောခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုနည်းပါးခြင်းစသည်တို့သည် lycra အထည်များ၏အကောင်းဆုံး elasticity ကိုရရှိသည်။. အခြားထူးခြားချက်များ အခြားအင်္ဂါရပ်များ နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ. စက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပုတီးစေ့များကိုပေါက်ကွဲစေသည်. စက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်ထည်များမဖောင်းပွစေရန်ရှောင်တိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောမှန်များရှိသည်. အပိုထည့်သည့်တိုင်ကီ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်ပေးခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုးဆေးပစ္စည်းများကိုခဲခြင်းမှရှောင်ရှားသည်. အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်. microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. အမှန်တကယ်ထည်ပြေးမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ချုပ်ရိုး detector,နှင့်တော်လှန်ရေးနှုန်းသည်၎င်း၏သံသရာအချိန်.ချုပ်ရိုးကိုလည်းအလိုအလျှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. optional ကို ရွေးချယ်စရာကိရိယာများ စက်ကိုစတင်ရန်နှင့်အရက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ထိန်းချုပ်ရန်အင်ဗာတာ,ပါဝါစားသုံးမှုကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ရေမီတာကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ရေပူပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရေတိုင်ကီကိုအပူပေးပြီးစုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အမွှာ-ဓာတုဗေဒတိုင်ကီသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ပြင်ဆင်၍ အလိုအလျောက်အစာကျွေးရန်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်. ယိုစီးမှုအချိန်သက်သာစေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှု. တစ်ပြိုင်နက်တည်း Chem,စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ကျွေးမွေးသေချာစေရန်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အဆိုပါစက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်သိရသည်,ယူရိုအပါအဝင်,ဦး.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ဗီယက်နမ်,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့.,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းမူပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း.၎င်းစက်သည်ထူးချွန်သောလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုနှင့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှထိုင်ဝမ်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်း၏ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပေါ်တွင်ထားရှိမှုတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။. အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 အရက်အချိုးသည်ရေထည်ထည်၏နှုန်းပေါ်မူတည်သည်. စဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်း:စဉ်ဆက်မပြတ်မြန်နှုန်းမှာထည်စောင်ရေ. လျင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ:ပိတ်ထည်ထဲကရေကျဆင်း,အထည်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောမိမိကိုယ်ကိုရေနည်းနည်းစုပ်ယူသည်-အလေးချိန်,ဒါကြောင့်အနိမ့် nozzle ဖိအားနှင့်အတူလျှင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ. ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသံသရာအချိန်ကာလဖြင့်ဖြစ်စေ၊:အဘယ်သူမျှမကိစ္စထည်အရှည်၏အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး,စုစုပေါင်းအဘယ်သူမျှမ.သံသရာ၏တူညီသောဖြစ်ကြသည်. အမျိုးမျိုးသောဆိုးဆေးလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်:ဆေးဆိုးသည့်စုစုပေါင်းအချိန်သည်အထည်အရှည်သို့မဟုတ်အထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်.ထည်အရှည်ကိုတိုစေခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအထည်အလိပ်မြန်နှုန်းသည်စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်. ပြီးပြည့်စုံသောမျိုးဆက်ပွား:မြတ်သောအရောင်ကိုက်ညီခြင်း.အသုတ်နှင့်ပြွန်ခြားနားချက်အခမဲ့. ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသုတ်ခြင်းအခမဲ့:အဲဒီအစားရေပေါ်မှာမျော၏,ထည်ပေါ်ကိုအပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်သည်.ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိရရှိ. ပွတ်တိုက်:ပေါ်ကိုအပေါ်ထည်ပို့ဆောင်,ပွတ်တိုက်မှုကနေရှောင်ရှား,ဆန့်,ခိုးယူ,ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ဆေးပြား. အလွန်အမင်းနိမ့်တင်းမာမှု,အစွန်းကောက်အခမဲ့:ရေထည်ထဲကကျဆင်းသွားသည်,ရေအနည်းငယ်စုပ်ယူသောအထည်,အထည်များ၏ဆွဲငင်အားကိုလျှော့ချ,အနိမ့်တင်းမာမှုရရှိ,အစွန်းကောက်အခမဲ့.ထို့ကြောင့်,ဆေးဆိုးခြင်းမပြုမီ spandex နှင့် tricot အထည်များကိုချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ. Excellent ကယူနီဖောင်းဆိုးဆေး:အနိမ့်အရက်ပမာဏ,အစာရှောင်ခြင်းစောင်ရေအထည်နှင့်အတူမြင့်မားသောငွေလဲနှုန်းရရှိ,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအတွက်ရလဒ်. အသိဉာဏ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်:ကျွမ်းကျင်မှုအော်ပရေတာမလိုအပ်ပါ. မြင့်မားသောဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်ဖျန်,သုတ်ခြင်းနှင့်အအေး:လျင်မြန်စွာဖျန်,135 တွင်တိုက်ရိုက်ရေအေးရေအေးသို့မဟုတ်ရေခဲရေ&ထုံးစံအတိုင်း;ဂ. အလွန်နည်းပါးသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု:စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ. Teflon အပေါ်ယံပိုင်း:ပွတ်တိုက်အားရှောင်ရှားရန် Teflon အပေါ်ယံပိုင်း. အပူလဲလှယ်အတွက် built:အပူဖလှယ်၏အမြင့်ထိရောက်မှု,စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေပြီးယူနီဖောင်းအပူချိန်သေချာစေပါ. တိုက်ရိုက်ကျွေးမွေးဓာတုအမှုန့်:လျင်မြန်စွာပျော်,congelation ကနေတားဆီး. အကောင်းဆုံးဆေးဆိုးပရိုဂရမ်းမင်း:အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာသည်အထည်အမျိုးမျိုးကိုပြသသည်,အကောင်းဆုံးဆိုးဆေးအစီအစဉ်ကိုဓာတုဓာတ်ပြုမှုနှင့်ရူပဗေဒအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အညီရရှိနိုင်သည်. မျိုးစုံ-system ကိုသုတ်ခြင်း:ရေချိုးရေ:ရေဆေးခြင်းသည်ရေကိုအမြန်ဆေးခြင်းနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်.က.Surfy လျှံသုတ်:လျင်မြန်စွာအမှုန်သို့မဟုတ် fluff အပေါ် floating ထွက်ဆေးကြော.ခ.စာရေးတံဖြင့်ဆေးခြင်း:လျင်မြန်စွာဆေးကြောခြင်းနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်တနည်းနည်းဖြင့်ရေထုတ်ယူပါ. နအဖ-စနစ်:အအေးကိုပေါင်းစပ်,သုတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Kier အဝတ်လျှော်–ဆေးဆိုးဆေး၏စုစုပေါင်းအချိန်ကိုတိုစေပြီးရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်. ကြမ်းပြင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ:ရေနည်းသောစုပ်ယူသည့်အထည်များကိုချခြင်း,ကြမ်းပြင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ,အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေ. အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်: ဆိုးဆေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်ထားသည်:က.အချိန်ကထိန်းချုပ်ထားသည်.ခ.အဘယ်သူမျှမကထိန်းချုပ်ထားသည်.ထည်စောင်ရေသံသရာ၏. အရက်အချိုးနှင့်အရက်ပမာဏကိုအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်သည်. စဉ်ဆက်မပြတ်ထည်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် display ကို. ထည်စောင်ရေထိန်းချုပ်မှုထပ်တူပြု. အထည်အမြန်နှုန်းနှင့်စောင်ရေအချိန်ပြသမှု. အပူနှင့်အအေးများအတွက်ထိန်းချုပ်မှု Modulating. တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်ထည်နှင့်သယ်ဆောင်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်. ရေထုထည်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. စုစုပေါင်းရေစံချိန်လောင်. Kier အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ် ဘက်ပေါင်းစုံသုတ်ဆေး:ရေချိုးရေ,အများကြီးသုတ်ခြင်းနှင့်နှစ်ဆလျှံသုတ်. အမွှာ-ဓာတုထိုးအကြံပေးအဖွဲ့. တိုက်ရိုက်အတွက်ဓာတုအမှုန့်အစာကျွေး,ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ-dilution. အင်ဗာတာသည်မော်တာမြန်နှုန်းကိုမှန်မှန်ထိန်းချုပ်ပြီးပါဝါချွေတာသည်. အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုနှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းကိုသံသရာလည်ပတ်မှုကိုပြသရန်.အလိုအလျောက်ချုပ်ရိုး detect. အအေးကိုပေါင်းစပ်,သုတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Kier အဝတ်လျှော်.
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အဆိုပါစက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်သိရသည်,ယူရိုအပါအဝင်,ဦး.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ဗီယက်နမ်,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့.,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းမူပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း.၎င်းစက်သည်ထူးချွန်သောလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုနှင့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှထိုင်ဝမ်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်း၏ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပေါ်တွင်ထားရှိမှုတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။. အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.၅ စဉ်ဆက်မပြတ်မြန်နှုန်းမှာထည်စောင်ရေ. ပိတ်ထည်ထဲကရေကျဆင်း,အထည်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောမိမိကိုယ်ကိုရေနည်းနည်းစုပ်ယူသည်-အလေးချိန်,ဒါကြောင့်အနိမ့် nozzle ဖိအားနှင့်အတူလျှင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ. အဘယ်သူမျှမကိစ္စထည်အရှည်၏အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး,စုစုပေါင်းအဘယ်သူမျှမ.သံသရာ၏တူညီသောဖြစ်ကြသည်. ဆေးဆိုးသည့်စုစုပေါင်းအချိန်သည်အထည်အရှည်သို့မဟုတ်အထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်. ထည်အရှည်ကိုတိုစေခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအထည်အလိပ်မြန်နှုန်းသည်စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်. မြတ်သောအရောင်ကိုက်ညီခြင်း.အသုတ်နှင့်ပြွန်ခြားနားချက်အခမဲ့. အဲဒီအစားရေပေါ်မှာမျော၏,ထည်ပေါ်ကိုအပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်သည်. ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိရရှိ. ပေါ်ကိုအပေါ်ထည်ပို့ဆောင်,ပွတ်တိုက်မှုကနေရှောင်ရှား,ဆန့်,ခိုးယူ,ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ဆေးပြား. ရေထည်ထဲကကျဆင်းသွားသည်,ရေအနည်းငယ်စုပ်ယူသောအထည်,အထည်များ၏ဆွဲငင်အားကိုလျှော့ချ,အနိမ့်တင်းမာမှုရရှိ,အစွန်းကောက်အခမဲ့.ထို့ကြောင့်,ဆေးဆိုးခြင်းမပြုမီ spandex နှင့် tricot အထည်များကိုချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ. အနိမ့်အရက်ပမာဏ,အစာရှောင်ခြင်းစောင်ရေအထည်နှင့်အတူမြင့်မားသောငွေလဲနှုန်းရရှိ,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအတွက်ရလဒ်. ကျွမ်းကျင်မှုအော်ပရေတာမလိုအပ်ပါ. လျင်မြန်စွာဖျန်,135 တွင်တိုက်ရိုက်ရေအေးရေအေးသို့မဟုတ်ရေခဲရေ&ထုံးစံအတိုင်း;ဂ. စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ. ပွတ်တိုက်အားရှောင်ရှားရန် Teflon အပေါ်ယံပိုင်း. အပူဖလှယ်၏အမြင့်ထိရောက်မှု,စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေပြီးယူနီဖောင်းအပူချိန်သေချာစေပါ. လျင်မြန်စွာပျော်,congelation ကနေတားဆီး. အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာသည်အထည်အမျိုးမျိုးကိုပြသသည်,အကောင်းဆုံးဆိုးဆေးအစီအစဉ်ကိုဓာတုဓာတ်ပြုမှုနှင့်ရူပဗေဒအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အညီရရှိနိုင်သည်. မျိုးစုံ-system ကိုသုတ်ခြင်း:က.ရေချိုးရေ:ရေဆေးခြင်းသည်ရေကိုအမြန်ဆေးခြင်းနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်.ခ.Surfy လျှံသုတ်:လျင်မြန်စွာအမှုန်သို့မဟုတ် fluff အပေါ် floating ထွက်ဆေးကြော.ဂ.စာရေးတံဖြင့်ဆေးခြင်း:လျင်မြန်စွာဆေးကြောခြင်းနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်တနည်းနည်းဖြင့်ရေထုတ်ယူပါ. အအေးကိုပေါင်းစပ်,သုတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Kier အဝတ်လျှော်–ဆေးဆိုးဆေး၏စုစုပေါင်းအချိန်ကိုတိုစေပြီးရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်. ရေနည်းသောစုပ်ယူသည့်အထည်များကိုချခြင်း,ကြမ်းပြင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ,အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေ.